Miyaad rabtaa inaad kasbato $ 30 si aad isku daydo Autodesk Topobase? - Gofumed
Maarso, 2008 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub
AutoDesk Labs waxay bixisaa $ 30 si loo tijaabiyo casriyeynta iyo shaqeynta Topobase. Si arrintan loo sameeyo, haddii aad tahay xubin ka mid ah tijaabiyeyaal Beta Autodesk oo aad kaalinta aad profile aad u xiiseeneyso badan oo ku saabsan Topobase barashada, waxaad heli doontaa $ 30 in shahaadooyinka hadiyad,, ma waxaad heli doontaa $ 20 kaliya 30 ugu horeysay ee xiiso u codsiga sida gudbisatay sida waxa Ali Kather ku sheegay blogkiisa inkastoo baaritaankani uu noqon doono guud ahaan marka la eego waxtarka loo yaqaan interfaces ee loogu talagalay AutoCAD 2009.
Saacadda nus saac ee tijaabinta masalooyinka ama casriyeynta, ma aha wax xun haddii aad u bedeli karto shahaadada Amazon, taas oo noqon karta aduunka awoodda ah in jiirarka la cuno. Imtixaannada waxaa lagu sameyn doonaa inta u dhexeysa 7 iyo 11 ee Abriil ee 2008.
Xulashada waxaa la siiyaa:
1 Isticmaalayaasha Topobase
2 Khabiirada GIS
3 Isticmaalaha GIS
Imtixaanadu waa meel fog, waxaad ka qaybgeli kartaa internetka ama telefoon. Khibrad leh Topobase looma baahna, natiijooyinka waxaa lagu maamuli doonaa si qarsoodi ah.
Haddii aad xiiseyneyso ama aad ka fekerayso qof inuu xiiseynayo, tani waa email-ka xiriirka: alison.kather@autodesk.com
Post Previous«Previous Halkee laga helaa Unugyada Microstation
Post Next Tareenada waqtiga-dhabta ah ee GPS-gaNext »